N'ileghachi anya na-ere gị Windows PC ma ọ bụ Mac onye ọzọ? Ma ọ na-mkpa ka ịzụta a ngwaọrụ ọhụrụ ma ọ bụ nanị maka ego, ị ga-eme ihe ọma na-ewepụ niile gara aga na ẹdude data si gị usoro. A na-egbochi n'ụzọ nke data.
Ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-adịghị ere gị na laptọọpụ, m t bụ a ihe amamihe na-ehichapụ ma ọ bụ ihichapu data na a mgbe niile na-na kọmputa gị na-arụ ọrụ kacha arụmọrụ. Mgbe virus ma ọ bụ ọzọ software metụtara nsogbu etịbe na kọmputa gị, erasing data ga-abụ oké echiche. Lee ndị ndapụta mgbe ị nwere ike hichaa ma ọ bụ ihichapu data:
Ụfọdụ ugboro, mgbe ị na-akwakọba nza nke data na kọmputa gị, ọ na-akawanye umengwụ na arụmọrụ na-ebelata ka ukwuu. Wiping ma ọ bụ erasing data nwere ike ime ka gị na kọmputa ngwa ngwa.
Mgbe virus infects kọmputa gị, nanị nhọrọ hapụrụ n'ihi na ị bụ ihichapu data site na kọmputa. Nke a ga-ahapụ diski ike gị dị ka ọ bụ ihe ọhụrụ.
N'ihi na mgbe mmezi nke ike nke diski ike gị. Wiping ma ọ bụ erasing disk ga-edozi otutu fragmentation na ọtụtụ ndị ọzọ okwu.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ka jikota ma ọ bụ ike ọhụrụ nkebi, ọ pụrụ achọ ka ihichapụ ụfọdụ nkebi na kọmputa gị. Nke a ga-achọ ka ị na ihichapu draịvụ ike gị site na kọmputa.
Ọ bụrụ na ị na-wụnye ọhụrụ OS na kọmputa gị, ị ga-ihichapu ochie OS na wụnye ọhụrụ. N'ihi ya, ị ga-ihichapu ochie data si ike mbanye, na-eme ka ụzọ maka ọhụrụ nwụnye.
E nwere ọtụtụ ihe mere erasing data. E nwere ole na ole ụzọ i nwere ike hichaa draịvụ ike gị ma na Windows na Mac. E nwere ọtụtụ ndị ọzọ software na i nwere ike iji ihichapu data ma ọ dịghị ihe bụ dị ka a pụrụ ịdabere na dị ka OS onwe ya.
Olee otú ehichapụkwa ike mbanye n'okpuru windows?
Windows na-enye ezi nhọrọ mgbe ọ na-abịa erasing data gị windows kọmputa. Otú ọ dị, ị ga-mgbe ndabere gị data n'ihu gị ihichapu ya na kọmputa gị. Ị nwere ike iji ọzọ software ma windows-enye gị ọzọ ala ụzọ ikpochapụ data. Ị nwere ike iji ma ochie echichi disk ma ọ bụ ọhụrụ OS echichi disk ihichapu data na kọmputa gị.
Ị nwere ike iji ndị na-esonụ na-ehichapụ ma ọ bụ ihichapu data gị ike mbanye na gị Windows. Ị ga-achọ azụ elu CD ma ọ bụ gị windows CD ka ehichapụkwa data.
Fanye CD na kọmputa na Malitegharịa ekwentị gị na kọmputa. Onye booting amalite ị ga-ahụ otu ọrụ button maka ịbanye n'ime buut nhọrọ. Press na bọtịnụ na-aga n'ihu mgbe kọmputa amalite na ịbanye buut nhọrọ ma họrọ CD-ROM.
Ọ ga-amalite ọzọ na buut si CD-Rom. On ọzọ ihuenyo ị ga-ahụ dị iche iche set elu nhọrọ. Na kwa e uche ndepụta nke disks na kọmputa gị. Họrọ disk ị chọrọ ihichapu na mgbe ahụ gaa nhọrọ ka ihichapụ Họrọ nkebi. Ọ bụrụ na e nwere ihe karịrị otu nkebi, ị nwere ike họrọ nke ọzọ ihichapụ ya.
Ugbu a, họrọ ndị NTFS nhọrọ maka mbanye na-ahọrọ formatting nhọrọ ngwa ngwa ma ọ bụ nkịtị.
Ọ ga-akpaghị aka Ọkpụkpọ gị disk na ọ ga-Malitegharịa ekwentị ọzọ. Jide n'aka na e nwere onye sistemụ na kọmputa gị na akpụkpọ ụkwụ na mbanye. Ole na ole nhọrọ nwere ike ịgbanwe site OS ka OS ma nzọụkwụ ga-anọgide otu mgbe erasing data. Ị reinstall ọhụrụ OS ma ọ bụ jiri ẹdude otu iji nweta gị formatted kọmputa.
Olee otú ihichapu ike mbanye na Mac?
Erasing ma ọ bụ ikpochapụ data on Mac yiri ma nhọrọ na nzọụkwụ na-obere dị iche iche dị ka ọ bụ dị iche iche os. Otú ọ dị, Mac na-enye gị inbuilt nhọrọ si erasing data gị Mac kọmputa. Dị ka windows, na-eji azụ elu nhọrọ mbụ ịzọpụta gị mkpa data. Ị na-achọghị ida a data n'ihi na ọ na-agaghị ekwe omume ka nwere ike naghachi data mgbe ọ na-e ehichapu site na kọmputa.
Lee ndị nzọụkwụ ị pụrụ ịgbaso iji hichaa ma ọ bụ ihichapu ike mbanye si Mac.You ga-achọ echichi disk nke OS ịrụ a ehichapụkwa.
Fanye diski n'ime gị mac na Malitegharịa ekwentị ya. Mgbe kọmputa malitegharia na-C enwe ruo mgbe logo nke Apple-egosi.
Mgbe ọhụrụ meziri Pop, họrọ ihe kwesịrị ekwesị nhọrọ. Iji ihichapu họrọ Macintosh HD olu na-aga nhọrọ bọtịnụ na ala. Họrọ ihichapu na wụnye ọcha OS nke sistemụ.
Nke a bụ ihe kasị mma na kacha ụzọ ihichapụ disk on Mac. Mgbe usoro, kọmputa gị ga-restarted na ọ ga-abụ ọhụrụ echichi N'ihi ya, ị ga-enwe iji weghachi ị mbụ data na kọmputa gị site na nkwado ndabere na mpaghara. Otú ọ dị, ị ga-achọ nhazi ikike tupu ị na-eme mgbanwe a. N'ihi ya, nwee Nkpọrọgwụ onye ọrụ na-ekwe ka ị na-eme ka mgbanwe a.
Ma ụzọ ndị dị mfe na mfe na-eso. Jide n'aka na ị nwere ndabere gị data na-eji mbụ echichi OS disks na-eme ka usoro ire ụtọ.
> Resource> Draịvụ> Olee otú iji Hichapụ / ihichapu Data si Ike mbanye na Windows na Mac